Mitatu mitambo yemahara yeApple Watch | Ndinobva mac
Mitatu mitambo yemahara yeApple Watch
Mune ino kesi tinounza matatu ekupedzisira mitambo yenyaya dzakasununguka dzeedu maApple Wachs uye ndinogona kutaura kuti ndevamwe veakanakisa andakaisa pane yangu wachi. Pasina kupokana, kune mitambo yakawanda yewadhi yedu yakangwara asi mimwe chete ndiyo inoita kuti titambe kwenguva yakareba uye vashoma vanokwanisa kuchinjira kune ino diki skrini. Chero zvazviri, chakakosha ndechekuti mitambo iyi inoita kuti tishandise nguva dzekuvaraidza uye dzese, sekuyambira kwandakamboita munhevedzano yekutanga. vakasununguka, saka hatisi kurasikirwa nechinhu nekuedza ivo.
Yekutanga mune dzino nhevedzano yevatatu ndeye Vegas Bowling Lite. Sezvo iwe ungangodaro wafembera kubva kuzita rayo, iwo mutambo we bowling watinogona kutevedzera mutambo weuyu mutambo unonakidza. Zviri nyore uye zvemahara saka usamirira zvakare kutamba mutambo we bowling pawachi yako.
Vegas Bowling Lite Tarisavakasununguka
Tinoenderera mberi Bata Round yeiyi nhevedzano yevatatu. Mune ino kesi, iwo mutambo wakafanana nekutyaira, asi zvine musoro pachiratidziro chidiki seicho cheApple Watch, mashoma sarudzo kupfuura kutendeuka anogona kuitwa. Chero zvazvingaitika, mutambo unovaraidza watinokurudzira.
Bata kutenderera - Clock mutambovakasununguka
Kupedzisa izvo zvatinogona kufunga seimwe yeakanakisa kutaura, Shinga Tsoko: Enda mabhanana!. Chokwadi vazhinji venyu maitoziva mutambo uyu weiyo iPhone uye kuti yakauya kuApple Watch nguva yadarika, asi isu hatinete kuigovana sezvo iri inonakidza kwazvo. Iyo inobvumidza mushandisi kuburikidza nechidzitiro chekubata kuenda kuburikidza nematanho uye chaizvo iyo yakajeka graphic pane diki skrini yeApple Watch yakanyanya kwazvo. Ichi ndicho chimwe cheavo isu tinokurudzira hongu kana hongu.
Shinga Tsoko: Enda Mabhanana!vakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mitatu mitambo yemahara yeApple Watch
Universal Audio's LUNA yekurekodha software inowanikwa yeMac chete
Dzorerazve mafaira ako nekukurumidza uye nyore neRenamer 6